> Resource > Apps > Sida loo Download Flappy Bird ee macruufka iyo Android uu soo jiido
The "Flappy Bird" abuure jiido ciyaarta kaliya sababtoo ah waxay ahayd mid aad u "qabatin" ciyaaryahano badan, kuwaas oo xitaa aan u seexdo karin for. Taasi nixi ah run ahaantii, laakiin ha eedeyn. Kaliya uu doonayaa in ciyaarta ka dhigi kartaa noloshaada ka fiican, ma ka xun. Haddii aad weli ma seexdo kartaa in laga badiyay, halkan ha kuu sheegi qaar ka mid ah tabaha wax yar dib mar kale si aad u hesho tirtiray Flappy Bird.
1. jailbreak Your iPhone ama iPad soo bixi Flappy Bird
2. Download Flappy Bird on Your Device Android
3. Raadi lagu bedelan karo Flappy Bird
Inkastoo Flappy Bird ayaa waxaa laga soo saaray App Store ah, waxaad weli heli kartaa siyaabo kale. Marka hore, waxaad u baahan tahay in aad JAILBREAK iPhone, iPad ama iPod taabto. Haddii aad iPhone ama iPad ma aha jailbroken, waxaad baran kartaa sida loo marayo Casharrada online hoos ku qoran:
Dadka isticmaala iPhone: Sida loo JAILBREAK aad iPhone in tallaabooyinka
Dadka isticmaala iPad: Sida loo JAILBREAK aad iPad
Wixii iPod users taabto: Sida loo JAILBREAK aad iPod taabashada
Ka dib markii jailbreaking qalab aad, waxaad kala soo bixi kartaa Bird Flappy ku dhinac saddexaad dukaamada app Shiinaha sida Tongbu . Dheji gaadhay Lugood, iyo qalab macruufka jailbroken u hagaagsan doonaa oo ku xidh.
Haddii aadan rabin in aad JAILBREAK qalab macruufka ah, sidoo kale waxaa jira jid. Waxaad isticmaali kartaa app Shiinaha magacaabay Kuaiyong, laakiin sidan laguma talinayo. Waa halis xogta aad qalabka.
Waa maxay dheeraad ah, haddii aad leedahay kun, anagana dhuminin, had iyo jeer telefoon aad ku iibsan karaan ciyaarta ka hor-raran maalinta Arbacada ah (Over at Abdilaahi ee entrepreneurialism Makhaayadaha loo yaqaan Arbacada ah, in badan oo baayacmushtariyadii ayaa iPhone iyo telefoonada Android oo ilaa la Flappy Bird hore lagu rakibay-.). Waa quruxsan qaali u kulul ee Flappy Bird dhawaan.
Sida aad ka akhrisan kartaa war ka kulul dhawaan, abuuraha saaro kaliya Flappy Bird ka App Store iyo macruufka users ma heli haboon soo bixi karo. Wixii Android isticmaala, waxaa jira siyaabo badan. Just furo browser ah ee aad taleefan ama kiniin oo ah madaxa dukaanka app ah dhinac saddexaad Android sida Google Play . Raadi ciyaarta Flappy Bird ay u soo bixi oo ku xidh on qalab aad.
Sidoo kale, waxaad dooran kartaa in si toos ah baadhaan Flappy Bird ee Google, iyo sidoo kale waxaad ka heli kartaa wax badan oo xal bixiya habka ay u soo bixi Flappy Bird.
3. Raadi Flappy Bird lagu bedelan karo
Dabcan, waxaad dooran kartaa kale oo laga cabsado in ka ciyaarta Flappy Bird haddii aad wax kama qaba ma ahan asalka ah. Waxaa jira 5 ugu fiican Flappy Bird bedelo aad u:
1) Ironpants (macruufka / Android - Free)
Ironpants hadda waa kii dhaxalka lahaa muuqata in Flappy Bird, wareegay sida No. 1 kulan ee liiska Chine oo lacag la'aan ah dukaanka App (afraad ee Android.). Badideed ayaa qorniinkaas free badalay shimbirta la geesi- ah nigiskaaga-xiran, oo ka duwan "Flappy Bird," waxaad u baahan tahay in la qabto shaashadda si ay u duuli intii ka sii weyn halkii kaliya waxaa ka jaftaa. Haddii wax, waxaa laga yaabaa in yar adag tahay.
Dadka isticmaala macruufka , Wixii Android users
2) Flappy Bee (macruufka / Android - Free)
Waxaa soo baxay labada macruufka iyo Android, siinaysaa fursad ay ku ciyaaraan ciyaarta saxda ah isla laakiin shinni aad. Si aad u noqoto si caddaalad ah, farshaxanka ee Flappy Bee waa badan gooyeen badan dad badan oo ka mid ah clones kale Flappy Bird.
3) Super Ball halmar isla (macruufka - Free)
In Super Ball halmar isla, sida in Flappy Bird, aad tahay shaqo waa mid fudud, iyo ku dhowaad inkiraan dhibsado (ilaa aad ka hesho wanaagsan oo ku garaacday score sarsare, in uu yahay). All inaad samayso waa ka jaftaa shaashadda si ay u bilaaban kubada, oo ha hoos. Haddii aadan ha soo daadiyaa, aad lumiso.
Dadka isticmaala macruufka
4) Fish Splashy (macruufka - Free)
Halkii ay ka been hawada iyo soo gebgabeeyay doodihii tuubooyinka cagaaran weyn, aad haddeer haysatidna in ay diiradda saaraan samaynta Xigta kalluun iyada oo caqabado quuska. Waxaa badan fikradda la mid ah, laakiin ay u muuqda xoogaa tad ka wanaagsan. Muuqaallo kale ayaa wax badan la safeeyey eegto.
5) sirgaxan Bird (Android)
Fikradu kulan ee waa mid fudud, meel dawacooyinku ay xaday ukunta shimbiraha ee (yaabanahay sababta!) Oo aad leedahay si ay u caawiyaan shimbirta ka heli halka gebgabeeyay doodihii caqabado kala duwan. Marka laga reebo sheekada lafaha, gameplay saxda ah waa isku mid sida Flappy Bird. Maxaa kala labadii kulan yihiin farshaxanka ah, music iyo xaqiiqda ah in shimbirta in kulankaan u eg a Bird careysan ayaa la dhagxiyey
Wixii Android users